ဒေါ်လာ ၂၉၀၀၀၀ ကျော်တန် BMW ကားကို ပိုင်ဆိုင်ပေမယ့် Gas ဖိုးအတွက် ကြက်ခိုးနေရတဲ့ တရုတ်အမျိုးသား - Lifestyle Myanmar
တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ရွိခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ လယ္သမားတစ္ဦးဟာ ေဒၚလာ ၂၉၀၀၀၀ တန္ဖိုးရွိတဲ့ BMW ဇိမ္ခံကားႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ထားေပမယ့္ သူ႔ကားရဲ႕ Gas ဖိုးအတြက္ ၾကက္နဲ႔ဘဲေတြကို စီခြၽမ္းျပည္နယ္ ေက်း႐ြာေတြမွာ လိုက္လံခိုးယူေနတဲ့အတြက္
ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္ဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါလယ္သမားရဲ႕ ေျဖာင့္ခ်က္အရ သူ႔ရဲ႕ဘဏၰာေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ သူ႔ကားရဲ႕ Gas ဖိုးအတြက္ ယခုလိုမ်ိဳး ခိုးယူေၾကာင္းခ်န္ဒူး စီးပြားေရးေန႔စဥ္ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ရဲေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ သူဟာ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အခ်ိန္ေတြမွာ သူလိုက္လံခိုးယူထားတဲ့ ၾကက္နဲ႔ဘဲေတြကို သူရဲ႕ဆိုင္ကယ္ေပၚမွာ ဝွက္ၿပီးသယ္ေဆာင္သြားတတ္ေၾကာင္းကို ေက်းလက္လမ္းေတြရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာေတြကေနတဆင့္ ေျခရာခံႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ကတည္းက ဖမ္းဆီးဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြ ႀကိဳးစားေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ ဇိမ္ခံကားကပိုျမန္တာေၾကာင့္ မဖမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲၫႊန္မႈး Zhang Hua ကေျပာခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ ၾကက္နဲ႔ဘဲေတြကို ခိုးယူၿပီးရင္ သူေနထိုင္ရာေနရာမွာရွိတဲ့ ေမြးျမဴေရးၿခံထဲကို ထည့္ထားေၾကာင္း၊ ၿပီးလွ်င္ ဝယ္လက္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေၾကာင္းကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ႐ုတ္ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာေတာ့ ယခုလိုကားဆီဖိုးအတြက္ ၾကက္ဘဲေတြခိုးေနရတဲ့ တ႐ုတ္လယ္သူေဌးအေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။
ဒေါ်လာ ၂၉၀၀၀၀ ကျော်တန် BMW ကားကို ပိုင်ဆိုင်ပေမယ့် Gas ဖိုးအတွက် ကြက်ခိုးနေရတဲ့ တရုတ်အမျိုးသား
တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ လယ်သမားတစ်ဦးဟာ ဒေါ်လာ ၂၉၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိတဲ့ BMW ဇိမ်ခံကားကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် သူ့ကားရဲ့ Gas ဖိုးအတွက် ကြက်နဲ့ဘဲတွေကို စီချွမ်းပြည်နယ် ကျေးရွာတွေမှာ လိုက်လံခိုးယူနေတဲ့အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်ဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါလယ်သမားရဲ့ ဖြောင့်ချက်အရ သူ့ရဲ့ဘဏ္ဏာရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ သူ့ကားရဲ့ Gas ဖိုးအတွက် ယခုလိုမျိုး ခိုးယူကြောင်းချန်ဒူး စီးပွားရေးနေ့စဉ် သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရဲတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သူဟာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်အချိန်တွေမှာ သူလိုက်လံခိုးယူထားတဲ့ ကြက်နဲ့ဘဲတွေကို သူရဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ ဝှက်ပြီးသယ်ဆောင်သွားတတ်ကြောင်းကို ကျေးလက်လမ်းတွေရဲ့ စောင့်ကြည့်ကင်မရာတွေကနေတဆင့် ခြေရာခံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၂ ရက်နေ့ကတည်းက ဖမ်းဆီးဖို့ အာဏာပိုင်တွေ ကြိုးစားပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဇိမ်ခံကားကပိုမြန်တာကြောင့် မဖမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရဲညွှန်မှုး Zhang Hua ကပြောခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ကြက်နဲ့ဘဲတွေကို ခိုးယူပြီးရင် သူနေထိုင်ရာနေရာမှာရှိတဲ့ မွေးမြူရေးခြံထဲကို ထည့်ထားကြောင်း၊ ပြီးလျှင် ဝယ်လက်တွေနဲ့ ချိတ်ပြီး ပြန်လည်ရောင်းချကြောင်းကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာတော့ ယခုလိုကားဆီဖိုးအတွက် ကြက်ဘဲတွေခိုးနေရတဲ့ တရုတ်လယ်သူဌေးအကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းအိမ်ကို သွားတဲ့အခါ သင်ဘယ်အရာကို အရင်ဆုံးသတိထားမိပါသလဲ။ တစ်ချို့လူတွေက အိမ်အတွင်းအလှဆင်ခြင်းတွေနှင့် ပရိဘောဂတွေကို ကြည့်တတ်ကြပြီးတော့ တစ်ချို့ကတော့ စာအုပ်စင်ပေါ်က စာအုပ်အမျိုးအစားတွေကို ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ချို့လူတွေက ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်(အိမ်ရှင်)တို့နဲ့ အတူနေတဲ့ ချစ်စရာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့သာ ကစားပါတယ်။ အနည်းငယ်သောလူတွေကတော့...
Single ဖြစ်ခြင်းကို သင်လက်ခံသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၂) ချက်
Single ဖြစ်ရတာကို သိမ်ငယ်တယ်လို့ ခံစားနေရသလား? Single ဖြစ်ရတာ သိမ်ငယ်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူးနော်။ RS တိုင်းက ပျော်ရွှင်နေတာမဟုတ်သလို Single တိုင်းကလည်း အထီးကျန်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Single တွေမှာ RS တွေမရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ...